Wakiilka Qaramada oo ka hadlay dowladda - BBC News Somali
Wakiilka Qaramada oo ka hadlay dowladda
19 Luulyo 2011
Image caption Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, danjire Mahiga
Ergeyga gaarka ee xoghahaya guud ee Qaramada Midoobey ugu qaabilsan arrimaha Soomaaliya, danjire Augustine Mahiga, ayaa sheegey in weli ay socoto qabanqaabada shirka wadatashiga ee arrimaha Soomaaliya ee dhowaan la qaban doono.
Ergeygu waxaa u sheegey in shirkan lagu gorfeyn doono waxqabadka xukuumadda kumeelgaarka iyo tallaabooyinka la qaadi doono marka waqtigeedu dhammaado. Qabashada shirkan wadatashiga ayaa lagu go'aamiyey shirkii xubnaha golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ku yeesheen magalaada Nairobi bishii May.
Wakiilka gaarka ah Qaramada Midoobey ee arrimaha Soomaaliya danjire, Augustine Philip Mahiga, ayaa sheegey in aayaha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya looga doodi doono shirkaasi wadatashiga ee qeybaha soomaalida loo qaban doono, kaas oo qeyb ka noqon doona dadaallada golaha ammaanka ee ku aadanaa xallinta khilaafaadka siyaasadeed ee ka jira dalka, hirgelinta dastuur uu dalku yeesho iyo sidii looga gudbi lahaa xilliga ku-meel-gaarka oo dalku uu muddo dheer ku soo jirey.
Shirkan muhimad gaar ah ayuu leeyahay. 'Waxaan wax walba dhameystiri doonaa marka la soo dhiso golaha wasiirada ee dowladda kmg ee Soomaaliya. Ujeeddada shirka waxaa weeye in go'aan laga gaaro waxa la qabanayo muddada sannadka ah ee baarlamaanka iyo dowladda loo kordhiyey. Waxaan dooneynaa in la isla oggolaado waxyaabaha la qaban doono muddada halka sano ah iyo weliba waqti go'an oo wax walba lagu fulinayo. sida wajibaadka hay'adahan looga fadhiyo baarlamanka iyo dowladda. go'aamada halkaa ka soo bixi doona waxaa shardi ah inay taageeraan wakiillada kala duwan ee qeybaha Soomaalida ee shirkaasi ka soo qeybgeli doona. Waxaan kaloo cadeynayaa in shirkaasi uu ka dhici doono gudaha dalka somalia' ayuu sheegay Mahiga.
Sida inta badan dhacda shirarka siyaasadeed ee Soomaaliya waxaa hareeya muranno iyo is-qabqabsi ku saabsan cidda ka qeyb gelaysa iyo tirade ergada, arrimahaas oo dib u dhac ku keena shirarkaasi amaba waqti badan uu ku lumo. Waxaan danjire mahiga weydiiyey, Daud Aweys, siday uga gudbi doonaan caqabadaha noocaasi oo kale ah. Waxaana uu iigu jawaabay' ka qeyb galayaasha kulankan haddii aan faahfaahiyo waxay noqon doonaan maamulka dowladda kmg, maamullada la aqoonsan yahay ee dalka ka jira, xiriirka wada shaqeyneedna la leh dowladda. hase yeeshee waxaan kaloo shirka ku casuumi doonaa qeybaha wakiilka ka ah haweenka, ururada bulshada, dhallinyarada iyo ganacsatada si shirkani u noqdo mid loo wada dhan yahay oo go'aamada ka soo baxa ay u noqdaan kuwo wax ku ool ah oo dan u ah mustaqbalka dalka Soomaaliya iyo shacabkiisa intaba'.
xukuumadda kmg ee Soomaaliya oo waqtigeedu ku ekaa sannadkan, ayaa muddo hal sano ah loo kordhiyey kaddib heshiis magaalada kampala ee dalka uganda ay ku gaareen madaxweynaha Soomaaliya, Shariif Sheikh Axmed iyo gudddoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan sheikh Aadan. shirkaasi waxaa gacan weyn ka geystey Qaramada Midoobey iyo madaxweynaha Uganda Yoweri kaguta museveni.